Raiso ny tenimiafin'ny ROOT | Avy amin'ny Linux
Raiso ny teny miafina ROOT
Nahita Script aho hanovana ny .bashrc mamorona solonanarana "sudo" sy "su". tsy teo aloha raha tsy nanao backup ny rakitra hamerenanao azy avy eo.
Ny zavatra ataony dia ny mandefa hafatra diso rehefa mampiasa "sudo" na "su" ary misambotra ny teny miafina amin'ny log antsoina hoe ".plog" izay ao an-trano.
Tehirizo ilay script
Omeo alalana famonoana izy.
Ataovy anaty terminal izany
Jereo avy eo ny rakitra .plog. Ary tsy maintsy misy ny teny miafin'ny root na ny mpampiasa sasany izay ao amin'ny sudoers.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » Raiso ny teny miafina ROOT
ho an'ireto tovolahy ireto, tsy tokony hatao ambanin-javatra ve ny fiarovana ara-batana ny ekipanay
Marina izany, raha mindrana fotoana fohy ny pc dia mila manamarina ireo solon'anarana 😀
Fanontaniana tsy manan-tsiny:
Ahoana no fanovan'ny script ny .bashrc an'ny mpampiasa sudoer tsy irery?
Oo tena tiako izany. Fitsapana.
Ka tsy misy dikany ve ny fiarovana sy ny encryption ampiasaintsika amin'ny gnu / linux? Heveriko fa tsy izany ny zava-misy, na iza na iza manandrana izany dia tokony maneho ny valiny. Hatramin'ny nampiasako an'ity rafitra ity dia namaky aho fa avo lenta ny haavon'ny encryption ao amin'ny Linux. Ny teny miafina dia voahidy amin'ny alàlan'ny algorithma fampihenana kriptografika tokana ary ankehitriny dia hita fa miaraka amina script tsotra dia esorina ny encryption. Miala tsiny aho fa aza mino izany.
Raha miasa dia jereo. Inona no mitranga dia ny script dia mamorona alias ao amin'ny .bashrc miaraka amin'i sudo sy su. Ary rehefa manoratra su sy / na sudo ianao. Mamaky ny solon'anarana aloha izy. tsy ny baiko toy izany. ka rehefa soratanao ny teny miafina dia apetrany ao anaty rakitra an-tsoratra mahazatra. ary mamafa ny solon'anarana avy eo ary mamela anao hampiasa sudo na ny mahazatra sy ny ankehitriny anao. Ny tiako holazaina dia toy ny trondro. Tsy hoe mandalo encryption izy io. fidirana sandoka io.
Ok izao raha azoko, dia efa gaga aho nandiso an'io fiarovana io tamin'ny torrera .. Misaotra anao nanazava izany.
Azo antoka, fa ny zava-tsarotra indrindra dia mitoetra ihany, mba hampidirina an-tsokosoko ao amin'ny PC an'ny niharam-boina ilay script, hampandeha azy ary avy eo hanangona ilay rakitra lavitra na handefasana azy amin'ny mailaka Any dia tsy maintsy hampiasa ny eritreriny ny tsirairay avy!
Nanitatra pacoeloyo be ianao, hoy aho. Trojan tsotra ity, izay mitaky mpampiasa handingana ny fepetra fiarovana isan-karazany sy ny fisian'ilay mpanafika eo an-toerana. Misy izany amin'ny OS rehetra.
Mikasika ny script ... raha tsy diso aho, ny ankamaroan'ny SUDO ankehitriny dia manamarina amin'ny tenimiafin'ny mpampiasa fa tsy ny teny miafina root. Ka ny teny miafina izay azo dia ny an'ny mpampiasa (eo amin'ny sudoers).
dia miaraka amin'ny sudo na su. Raha misy mpampiasa afaka mampiasa sudo, dia satria izy dia ao amin'ny sudoers ary manana tombony mitovy amin'ny root .. sa tsia?
tsy foana, miankina amin'ny fananganana sudoers izany. Na izany na tsy izany, ny tena fahita indrindra dia ny hoe, manana fidirana feno ianao.
Ny tiana holazaina dia ny hoe ny hetsika natao tamin'ny fampiasana ny sudo dia matetika voatanisa
ny fiantsoana hoe "su" tsotra fotsiny dia ahafahanao miditra amin'ny kaonty faka.
Tena mampidi-doza izany raha mampiasa teny miafina tsara ianao amin'ny tontolo iainana na atrikasa. Afaka milalao izany ho anao izy ireo. Eny, azon'izy ireo natao ny nilalao ...
Tsy ilaina ny mahita ny teny miafin'ny olon-tsy fantatra, saingy mieritreritra aho fa ampy izay ny olom-pantatra.
Ary tsarovy, ny ankamaroan'ny manao dika mitovy amin'ny teny miafiny na mampiasa lamina mahazatra. Aza hamaivanina azy ireo mihitsy. Raha tena fatra ianao dia mazava ho azy ...
Eny, tsy mikorontana aho ... Tsy manan-javatra hafenina aho, eny fa na dia ny fanadinana farany aza ... ary raha mila teny miafina aho dia anontaniako ... ary manana ny fisie-ko amin'ny kapila mangirana ivelany .. . miaraka amina backup amin'ny solosaina findainy izay mijanona ao amin'ny House.
Tokony hitady ny fahatsorana sy ny fahaiza-manao isika, anio velona aho rahampitso tsy fantatro ... Miaina aho anio ary ny ambiny dia mihoatra ny ora.
Hataoko ao an-tsaina izany, misaotra anao.
Ahoana no fomba andikilan'ity script ity ao anaty .bashrc an'ny mpampiasa sudoer?
Raha manana kaonty amin'ny solosaina ianao dia tsy afaka miditra amin'ny tranon'ny mpampiasa hafa raha tsy mahazo alalana ary mbola miahiahy ihany aho fa azonao atao ny manova ny .bashrc an'ny niharam-boina.
Tena misalasala aho fa hahomby izany raha tsy hoe tsy mitandrina be ilay mpampiasa sudoer.
Mila mitandrina tsara isika amin'ny toetrandro!
Fanontaniana iray, raha tsy manana ny teny miafin'ny faka aho, ahoana ny fomba hanomezako ny alalana famonoana rakitra? Sa miasa ny mpampiasa mahazatra?
Mazava. Ny fampiharana fahazoan-dàlana dia tsy an'ny root fotsiny.
rehefa avy nanandrana aho dia mamafa ny .sudo_sd ary tsy mahita na inona na inona ao amin'ny google (na motera fikarohana hafa)
Nofafako ny .plog ary voafafa ho azy .sudo_sd ary tsy afaka miditra ho root aho
MIORA AMIN'NY FANOMPOANA NY ALIAS
KARATRA ARA-BAIBOLY dia hoy izy:
Raha mandeha amin'ny MAC ity dia handeha hanodinana magazay Apple aho… hey! fa kely fotsiny, tsy anaty drafitra mpampihorohoro 😉
Mamaly an'i Taronjeta
Ary raha mampiasa gksu na mitovy aminy amin'ny kde aho
Izy io koa dia misambotra ny teny miafina
fiainana satroka dia hoy izy:
Ny fanatanterahana an'ity script ity dia azo sorohina amin'ny alàlan'ny fanomezana alàlana hamaky fotsiny .bashrc
Mamaly an'i cascovida
Voasedra, mandeha izy, misy fetrany ny aunk. Mianatra zava-baovao hatrany amin'ny Linux ianao.
Ahoana no fomba hamerenako ireo fanovana natao indray mandeha? Nofafako ny .plog ary tsy avelako hampiasa sudo izany:
bash: /home/alberto/.sudo_sd: Tsy misy ilay rakitra na lahatahiry
Sakano ny rakitsary misy script miaraka amin'ny tsipika baiko